Dad loo xiray nabadoon la dilay. - Caasimada Online
Home Warar Dad loo xiray nabadoon la dilay.
Dad loo xiray nabadoon la dilay.
Ciidamada Dowlada Soomaaliya ayaa soo qabtay kooxihii dilay Nabadoon caanka ahaa Magaalada Beledwayne.
Maxamuud Diiriye Maxamed oo kamid ah masuuliyiinta maamulka Gobalka Hiiraan oo la hadlay warbaahinta wuxuu sheegay in ciidamada ammaanka ee dowlada howlgal ay sameeyeen ay kusoo qab qabteen dad kala duwan.
Masuulkaan ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay soo qabteen labo qof oo hada lagu haayo baaritaano ku aadan arimaha dilka loo geestay nabadoonka.
waxa sidoo kale uu sheegay in xilliga dilka uu dhacayay Nabadoonka uu ku sugnaa meel aan sidaas uga fogeen isbitaalka Magaalada Beladweyne halkaasina kooxaha hubaysani ay ku toogteen durbana waxaa meesha gaaray ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya.
Nabadoon Barre Guuleed Xalane ayaa wuxuu kamid ahaa dadkii sida weyn ugu qeylo dhaaminayay in loo gargaaro dadkii uu saameeyay wabiga Shabeele fatahaadii uu ka gaystay Magaalada Beladweyne.